Fampitahana hafainganam-pandeha eo amin'ny iPad rehetra [VIDEO] | Vaovao IPhone
Ny fanombohana ny iPad Pro dia nanokatra làlana vaovao ho an'ny fampandrosoana ho an'ny tontolo iPad. Tsy ny haben'ny efijery ihany no mahasarika ny saintsika fa ny hery tsy mampino izay miafina ao ambadik'ireo 12,9 santimetatra ireo, avo kokoa noho izay hita hatreto amin'ny iPad. Na izany aza, manintona antsika foana ny te hahafanta-javatra, Tianay ho hita ny fomba fampisehoana iPad Pro amin'ny iray tampo amin'ireo "zandriny" rehetra, izany no antony itondranay anao ity horonantsary mahafinaritra an'i EverythingApplePro mba ho hitanao amin'ny tenanao sy amin'ny tena izy ny fahasamihafana misy eo amin'ny iPad Pro sy ny sisa amin'ireo fitaovana iPad misy hery kely kokoa sy efijery. Tena mendrika azy ve ny teknolojia an'ny iPad Pro? Tsarao ho anao.
Amin'ity horonantsary ity dia ahitantsika ny iPads rehetra navoakan'i Apple hatreto, mampiseho ny fiatraikany sy ny fotoana fanatanterahana ny fampiharana misy fifandraisana hafa. Tsy azo ihodivirana ny fahitana horonan-tsary marobe toa izao amin'ny Internet isaky ny mandefa fitaovana vaovao i Apple, te handresy lahatra ny tenanay izahay fa tsy ilaina ny fanavaozana, na indraindray ny mifanohitra amin'izay no marina, manamarina ny fividiananareo. Ireo video ireo mazàna dia miteraka resabe, ka avelanay ianao hitsara ho anao ny fahombiazan'ny iPad rehetra navoaka hatreto.
Raha tokony hifampiraharaha tampoka dia sendra fitsapana maromaro tany amin'ireo faritra tena misy fiatraikany amin'ny fampiasana iPad isan'andro izahay. Ankoatr'izay, manana fitsapana ny famohana, boot, hafainganam-pandeha WiFi ... Ary koa, ny Geekbench miasa dia tsy tokony ho diso hampitaha ny herin'aratra. Nahita fanatsarana be dia be izahay tamin'ny iPadsAngamba izy ireo no fitaovana ahazoana tombony indrindra amin'ny fanavaozana, ny faharetan'ny faharetany manamarina izany. Jereo ho anao fa tsy angano io, tena mandeha tsara ny iPads rehefa mandeha ny fotoana, fa ny herin'ny ankehitriny kosa tsy azo resena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fampitahana hafainganam-pandeha eo amin'ny iPad rehetra [VIDEO]
Tsy maintsy ateliko amin'ny orona ny dokam-barotra mba tsy hilalaovan'ny video ??? Ahh fa mandeha tsara ilay video dokam-barotra!
Steve asa dia nankasitraka ny mety hamoronana famantaranandro